Kismaayo & Warta-Nabadda oo isugu soo haray gaba-gabada tartan aqooneedka bisha Ramadan | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Kismaayo & Warta-Nabadda oo isugu soo haray gaba-gabada tartan aqooneedka bisha Ramadan
Kismaayo & Warta-Nabadda oo isugu soo haray gaba-gabada tartan aqooneedka bisha Ramadan
Muqdisho (SNTV)-Tartanka caawa waxaa wada ballansanaa degmoooyin 4-ah oo isugu soo haray afar dhammaadka tartanka, Qeybta hore ee tartanka ayaa waxaa isku arkay degmooyinka Warta-Nabadda & Hodan halka qeybta dambe ee tartanka ay is arkeen degmooyinka Kismaayo & Shibis.
Tartameyaasha Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir waxaa la weydiiyey 7- Su’aal, todobadii su’aal ee la weydiiyay waxa ay ka jawaabeen Hal su’aal, mana jirin wax ka faa’iideysi ah oo ay heleen. sidaa darteed wadarta guud ee dhibcaha tartameyaasha Degmada Hodan ay heleen waxay noqotay 2- dhibcood.
Tartamayaasha Degmada Warta Nabadda ee Gobolka Banaadir waxaa dhankooda la weydiiyay 7– su’aal, waxa ay ka jawaabeen saddex su’aal, waxa ayna ka faa’iideysteen labo su’al oo soo hareer martay tartamayaasha Degmada Hodan, sidaasi darteed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartameyaasha Degmada Warta Nabadda waxay noqotay 10- dhibcood.
Tartamayaasha Degmada Warta Nabadda ee Gobolka Banaadir ayaa caawa u soo gudbay wareegga ugu dambeeya ee tartanka, halka tartamayaasha Degamda Hodan ay u tartami doonto kaalinta 3-aad.
Dhanka kale isla habeenkan caawa ah waxaa tartan aqooneedka bisha Ramadan ee warbaahinta Qaranka ku tartamay degmooyinka kismaayo & Shibis.
Tartameyaasha Degmada Shibis ee Gobolka Banaadir waxaa la weydiiyey 7- Su’aal, todobadii su’aal ee la weydiiyay waxa ay ka jawaabeen afar su’aal, mana jirin wax ka faa’iideysi ah oo ay heleen. sidaa darteed wadarta guud ee dhibcaha tartameyaasha Degmada Shibis ay heleen waxa ay noqotay 8- dhibcood.
Tartamayaasha Degmada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose waxaa dhankooda la weydiiyay 7- su’aal, waxa ay ka jawaabeen shan su’aal, iwaxa ayna ka faa’iideysteen hal su’al oo soo hareer martay tartamayaasha Degmada Shibis, sidaasi darteed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartameyaasha Degmada Kismaayo waxay noqotay 12- dhibcood.
Tartamayaasha Degmada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa caawa u soo gudbay wareegga ugu dambeeya ee tartanka, halka tartamayaasha Degamda Shibis ay u tartami doonto kaalinta 3-aad.
Tartanka ay tabineyso warbaahinta Qaranka isla markaana uu taaba gelinayo maamulka gobalka Benaadir waxaa habeen dambe kaalinta 3-aad u wada tartami doono degmooyinka Hodan & Shibis oo ka wada tirsan Gobolka Banaadir.
Previous articleXafiiska Warfaafinta Madaxtooyada oo lacag ciidsiin ah u qeybiyey kudhawaad 100 carruur ah oo ay dhaleen wariyaashii ku dhintay Muqdisho
Next articleWasiirka Amniga XFS oo saxiixay heshiis 40 Milyan ku kacaya oo Booliiska lagu dhisayo